I-PA013 - I-Alarm Yomuntu Yakho Yokuvikela Ukuzivikela Kwezingane - Izixazululo ze-OMG
I-PA013 - I-Alarm Yomuntu siqu Yokuzivikela Yezingane
I-alamu Ephuthumayo engu-130 dB: I-Alarm Yezokuphepha Komuntu iyindlela ehlangene futhi elula yokuzigcina uvikelekile wena noma obathandayo. I-alamu ekhipha ama-decibel angu-130 omsindo ingadida kakhulu noma ngubani eduze kwayo, ikakhulukazi lapho abantu bengayilindele. Ukuphazamisa umhlaseli nge-alamu yakhe kuzobenza bame futhi baziqinise emsindweni, bakunike ithuba lokuphunyuka. Umsindo uzophinda wazise nabanye abantu bendawo yakho ukuze uthole usizo.
UKUPHEPHA LED Lights: Ngaphezu kokusebenzisa uma uwedwa, le alamu ephuthumayo iza namalambu e-LED kulezo zindawo ezingakhanyisiwe kangako. Ungayisebenzisa ukuthola okhiye esikhwameni sakho noma ilokhi emnyango wangaphambili. Ukukhanya kwe-LED kukhanyisa indawo emnyama futhi kunciphise umuzwa wokwesaba. Ilungele ukugijima ebusuku, inja ehamba ngezinyawo, ukuhamba, izintaba, amatende neminye imisebenzi yangaphandle.
KULULA KUSEBENZISA: I-Safe Sound Personal Alarm ayidingi kuqeqeshwa noma ikhono ukuze lisebenze, futhi ingasetshenziswa yinoma ngubani kungakhathalekile ubudala noma amandla omzimba. Mane nje udonse i-Pin strap yesandla, bese i-alamu ebhoboza indlebe izosebenza kuze kube ihora lomsindo oqhubekayo. Uma udinga ukumisa i-alamu xhuma iphini libuyele ku-alamu yomsindo ephephile. Ingasetshenziswa kabusha kaninginingi.
UKUHLELWA NOKWENZEKA OKWENZEKAYO: Isihluthulelo se-Safe Sound Personal Alarmchain sincane, siyaphatheka futhi senzelwe kahle ukuthi sinamathisele ezindaweni ezahlukahlukene, kungaba kubhande lakho, izikhwama, izikhwama, imichilo yobhaka, nanoma iyiphi enye indawo ongayicabanga. Ilungele abantu bayo yonke iminyaka njengabantu asebekhulile, abasebenza amashifu sekwephuzile, abasebenzi bezokuphepha, abahlala emafulethini, abagibeli, abahambi, abafundi nabagijimi.
UKUKHETHA IZIPHO NGOKUSEBENZA: Le alamu yomuntu siqu ephephile iza nezicucu ezi-3 futhi inikeza izinketho zemibala eminingi, ukuze ukwazi ukwabelana nabangani kanye namalungu amaningi omndeni noma uhlangabezane nezidingo zezintandokazi ezahlukahlukene. Ukupakisha okuhle, kuyisipho esihle sosuku lokuzalwa, usuku lokubonga, uKhisimusi, uSuku lwezithandani nezinye izikhathi.
Kubantu Abadala: I-Alarm Yomuntu futhi iyithuluzi elingavamile labantu asebekhulile noma abagulayo abaphethwe yisifo esingelapheki esingadinga ukwazisa izihlobo noma omakhelwane ezimeni eziphuthumayo zezokwelapha.
Okwezingane: Ngabe ufuna izingane zakho zicele usizo esimweni esiyingozi? Le alamu enhle inkulu ngokwanele ukwenza kube lula enganeni ukudonsa iphini, ngaphandle kokukhala kakhulu. Ingane yakho izobe ijabulela amehlo ajabulisayo edivayisi futhi izoba ngabangane ngenkathi uzoqiniseka ukuthi ingane yakho ingaphansi kokuvikelwa.
Kubesifazane: Kungaba emgwaqweni ongalungiswa, endaweni yokupaka izimoto emnyama noma eduze nekhaya, i-alamu izohlala iqaphile. Uma uzizwa usongelwa, phatha i-alamu eboshwe ngenqindi bese udonsa intambo ngokucijile njengoba izimo zidinga.
Abahambi: Umshini uzophinde ungene kahle lapho kuzonyuka khona lapho kunengozi enkulu yokulahleka endaweni engajwayelekile noma ukushiywa ngemuva kweqembu.
Ukubuka okuphelele kwe-190 Ukubuka kwe-1 Namuhla